अस्ट्रेलियाको भिषा लागेपछि मनकामना दर्शन गर्न जाँदा बाटैमा दुर्घटनामा परि सुमित सहित उनकी आमा र बहिनीको पनि मृत्यु ! गाउनै शोकमा डुब्यो « Sajha Page
September 18, 2019 Wed
अस्ट्रेलियाको भिषा लागेपछि मनकामना दर्शन गर्न जाँदा बाटैमा दुर्घटनामा परि सुमित सहित उनकी आमा र बहिनीको पनि मृत्यु ! गाउनै शोकमा डुब्यो
प्रकाशित मिति: July 30, 2018
शनिबार दिउँसो १ बज्दै थियो । भानु नगरपालिका १ भन्सारमा मानिसहरुको ठूलो भीड लागेको थियो । सबैका अनुहार मलिन र निन्याउरा देखिन्थे । चितवनको चुम्लिङटारमा शुक्रबार भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका एकै परिवार तीन सदस्यको शव ल्याइपुर्‍याइयो ।चितवनको भरतपुर अस्पतालको शव गृहमा एक रात राखेर शवलाई उनीहरुकै पुर्ख्यौली घर भन्सार लगियो ।
बस दुर्घटनामा नपरेको भए शुक्रबार साँझ नै हाँस्दै रमाउँदै पुर्ख्यौली घरमा पुग्ने विष्णुकुमार श्रेष्ठको परिवारका तीन सदस्य शनिबार निर्जिव बनेर घर अगाडिको आँगनमा तेर्सिए । ८ बर्षदेखि काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका विष्णुकुमारकी ४७ वर्षीया श्रीमती कमला श्रेष्ठ, २७ बर्षका छोरा सुमित र १९ बर्षकी छोरी कविनाको चुम्लिङ्टार वस दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको थियो ।
घाइते विष्णुकुमार चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचाररत छन् । अस्पतालमा छट्पटाइरहेका विष्णुकुमारले आफ्ना तीन प्रियजनलाई अन्तिममा एकपटक हेर्न र विदाई गर्न समेत पाएनन् । छोरा सुमितको अस्ट्रेलियाको भिसा लागेको थियो ।
अस्ट्रेलिया जानुअघि मनकामनाको दर्शन गर्ने र एक पुर्ख्यौंली थलोमा पुगेर सबै आफन्तहरुसँग भेटघाट पनि गर्ने योजना अनुसार उनीहरु मनकामना र तनहुँ आउँदै थिए । तर दुःखद दुर्घटनामा परेका उनीहरुले नत भगवानको दर्शन नै गर्न पाए नत आफन्तहरुसँग भेटेर खुसी साट्न नै । बुबा विष्णुकुमार काठमाडौंमा होटलमा प्रबन्धकका रुपमा काम गर्थे । उनले दुवै छोराछोरीलाई उतै राखेर पढाए । उनको परिवारमा एक छोरा, एक छोरी र एक श्रीमती मात्रै छन् । तीनै जनाको दुर्घटनामा ज्यान गयो ।
छोरालाई अष्ट्रेलिया पठाउने र परिवारलाई सुख दिने परिकल्पना गरेका विष्णुकुमारको सपना चुम्लिङटारको दुर्घटनामा फुटेको छ । उनी परिवारमा एक्लो भएका छन् । घर अगाडि राखिएका लासहरुलाई अन्तिम संस्कार लागि घाटतर्फ लैजाने तयारी गरियो । उपस्थित भीडमा रुवावासी चल्यो । एकै घरको आँगनबाट तीन तीनवटा लास उठाउँदा यस्तो घटना फेरि कसैलाई पनि नपरोस् भगवान भनेर कामना गर्नेहरु थिए सबै ।
अन्तिम बिदाइका लागि पुगेका एक वृद्ध भन्दै थिए, ‘आमा बनेर आफैले जन्मायौ, आफूसँगै लिएर गर्‍यौ, यस्तो कसैको नहोस्, कसैको देख्न र सुन्न नपरोस् ।’ शुरुमा आमा कमलाको शव उठाइयो । त्यसपछि छोरा सुमित र छोरी कविनाको । लासका पछितिर मलामीहरु लाग्छन् तर यहाँ लासको पछि लास नै लागिरहेको जस्तै अनभूति हुन्थ्यो ।
भर्खरै रोपिएको भन्सारको खेत हरियो हुँदै थियो । खेतका आलीका डिलैडिल मलामीहरु शंख बजाउँदै हिँडेको दृश्य र लस्करै लासहरुको ताँतीले मन भक्कानिन्थ्यो । जहाँ उनीहरुका पूर्खाहरुको अन्तिम संस्कार गरियो सतीघाटमा, त्यही नै उनीहरुको पनि अन्तिम संस्कार भयो ।
केटीयम चढ्ने रहर छ तर पैसाको कमि छ भने आयो खुसीको खबर, केटीयमले ल्यायो अत्याधुनिक फिचर सहितको सस्तो ड्यूक १२५ (मूल्य सहित)
काठमाडौं, १० भदौ । युवाहरुको रोजाईको बाइक केटीएमले नया मोडल नेपालमा पनि सार्बजनिक गरेको छ । आज बुधबार नाडा अटो
गाई काटेर खादा हिन्दुलाई आपत्ति किन ? कहिले देखि गाई नेपाली हिन्दुहरुको माता भयो ?
एमालेले कतिसम्म राष्ट्रघात गरेको छ, योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषालले लेखेको यी २४ बुँदा पढौं
मन्दिरको हरेक टुडालमा किन कुदिन्छ अस्लिल यौनजन्य कला ? यस्तो छ रहस्य - सबैको कौतुहलताको जवाफ पढ्नुहोस (फोटो सहित)
चर्चित लोक गायक कृष्णभक्त राईको आवाजमा सजीएको गीत 'जीवन हाम्रो केहि पल' को रेर्कडीङ सम्पन्न (भिडियो)
दशैको भित्री कथाः यसकारण हुँदैछ बहिस्कार !
यसकारण नेवार महिलाले फुली लगाउदैनन्,जुन रहस्य तपाईलाई थाहै छैन
यी महिला, जसले ठेक्का पाउन मन्त्रि देखी सेक्युरिटीसँग ‘सेक्स’ गरिन, यसरि आफैले गरिन यस्को खुलाशा
शिशु जन्मिएपछि कति दिनसम्म यौनसम्पर्क राख्नु हुँदैन ? जानी राखौ
छोरा या छोरी के पाउने अब तपाइको हातमा : ९९% सफल यो बिधि अपनाउनुहोस् र चाहे अनुसार सन्तान पाउनुहोस्